यस्तो छ संसारको सबैभन्दा महंगो कार ‘रोल्स–रोयस बोट टेल’ :: Setopati
यस्तो छ संसारको सबैभन्दा महंगो कार ‘रोल्स–रोयस बोट टेल’
एजेन्सी न्यू दिल्ली, जेठ ३०
संसारको सबैभन्दा महंगो गाडी कस्तो होला? अनि त्यसको मूल्य कति पर्ला? अटो पारखीहरूलाई मात्र होइन, यो साधारण व्यक्तिहरूको पनि चासोको विषय हुनसक्छ।
बेलायती अटोमोबाइल निर्माता कम्पनी रोल्स–रोयस मोटर कार निर्माताले हालसालै संसारकै सबैभन्दा महंगो गाडी ‘रोल्स–रोयस बोट टेल’ गाडी सार्वजनिक गरेको छ। जसको मूल्य धनाढ्यहरूलाई समेत ‘महंगो’ लाग्न सक्छ।
‘द २०२१ रोल्स–रोयस बोट टेल’ चार–सिटर लक्जरी कार हो। जसको लम्बाई १९ फिटको छ। यसको बाहिरी आवरण ढुङ्गाको जस्तै देखिन्छ। यो डिजाइन रोल्स–रोयस स्वेप्टेल कारबाट प्रेरित डिजाइन हो।
‘रोल्स–रोयस बोट टेल’ सार्वजनिक हुनु अघिसम्म ‘रोल्स–रोयस स्वेप्टेल’ संसारको सबैभन्दा महंगो कार थियो। जुन सन् २०१७ मा १२.८ मिलियन पाउन्डमा बिक्री भएको थियो। अर्थात्, नेपाली झन्डै २ अर्ब ११ करोड २८ लाख ८७ हजार ३ सय रूपैयाँ।
‘रोल्स–रोयस स्वेप्टेल’ नै यति महंगोमा बेचियो भनेपछि नयाँ ‘रोल्स–रोयस बोट टेल’ योभन्दा महंगो हुने पक्का छ। ‘रोल्स–रोयस बोट टेल’ पहिलो रोल्स–रोयस कार हो, जुन लक्जरी कार मेकरको नयाँ कोचबिल्ड कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको छ। यसको नाममा भएको ‘बोट टेल’ ले जे–क्लास रेसिङ याच्च (नौका) लाई बुझाउँछ।
रिपोर्टका अनुसार ‘रोल्स–रोयस बोट टेल’ तयार हुन चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। यसको जम्मा तीन वटा युनिट बिक्री हुने भनिएको छ।
रोल्स–रोयसले आफ्नो स्वेप्टेल एक धनाढ्य युरोपियनको अनुरोधमा बनाएको थियो। ‘द २०२१ रोल्स–रोयस बोट टेल’ पनि अनुरोध र माग भएरै बनाइएको हो। रोल्स–रोयसका अनुसार तीन संरक्षकहरूले ब्रान्डका डिजाइनरहरूसँग यस सुपर लक्जरी गाडी निर्माणको लागि माग साझा गरे। उनीहरूको माग थियो, ‘यस्तो वस्तु देखाइयोस् जुन पहिले कहिल्यै देखिएको छैन।’
त्यसपछि रोल्स–रोयस आफ्नो तर्फबाट पूर्ण काममा लाग्यो। कारको पछिल्लो भागमा लक्जरी स्पिड बोटको जस्तै डिजाइन गर्यो। यसको पछाडिको भागमा भएको बुट स्पेस (डिकी) पुतलीले पखेटा फैलाएझैं फैलिदैँ खुल्छ। यो विशेषता निकै पृथक छ।
कारमा एक्स्क्लुसिभ सन भाइजर छ। जुन सामान्य आधुनिक गाडीहरूमा पाइनेभन्दा महंगो छ। यसले घामबाट बचाउँछ। कारभित्र ट्रे पनि छ। यो आफ्नो उचाईंअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यो गाडीमा यस्ता थुप्रै विशेषता छन् जुन सामान्य गाडीमा पाउन मुस्किल छ।
रोल्स–रोयस बोट टेलमा फ्यान्टम, ब्ल्याक ब्याज र कलिनन् गाडीमा प्रयोग हुने इन्जिन जडान गरिएको छ। भी१२ ६.७५ इन्जिनले ५ सय ६३ एचपीको पावर जेनेरेट गर्छ।
यस्ता विभिन्न विशेषता भएको कारको मूल्य कम्पनीले अमेरिकी २८ मिलियन डलर तोकेको छ। यो नेपाली तीन अर्ब २७ करोड ६२ लाख २९ हजार ६ सय रूपैयाँ हो। ‘रोल्स–रोयस स्वेप्टेल’ को तुलनामा उक्त कार एक अर्ब १६ करोड ३३ लाख ४३ हजार तीन सय रूपैयाँ महंगो छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ३०, २०७८, १८:००:४७